उपसभामुख तामाङ आमाछोरा नै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त ! – Namaste Dainik
उपसभामुख तामाङ आमाछोरा नै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त !
September 1, 2020 September 1, 2020 NamastedainikLeaveaComment on उपसभामुख तामाङ आमाछोरा नै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त !
कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि विगत १४ दिनदेखि होम आइसोलेसनमा रहेका वाग्मती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङ कोरोना मुक्त भएकी छन् । उपसभामुख तामाङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू र छोराको समेत कोरोनाको पुनःपरीक्षण गर्दा निगेटिभ रिपोर्ट आएको जानकारी दिएका हुन् । उपसभामुख तामाङले आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता र सद्भावसहित स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुहुने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
“मुख्यगरी कोरोनाबाट बच्न भौतिक दूरी कायम गर्ने हो, सामाजिक रूपमा दूरी बढाउने वा तिरस्कृत गर्नेभन्दा पनि सामाजिक सद्भाव बढाउन आवश्यक ठान्दछु”, उपसभामुख तामाङले भनेकी छन्। उपसभामुख तामाङ र उनको छोरालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरु विगत १४ दिनदेखि हेटौँडास्थित निवासमा आइसोलेसनमा थिए ।
भारतको चेन्नईमा तीजको बेलामै एक नेपाली चेलीद्वारा दे ह त्या ग
कोरोना सं’क्रमणबाट नेपालमा भर्खरै एक थप सहित ६ जनाको मृ’त्यु।